Indlela amaGears kunye neeSpools ezithinta ngayo ukubuyiswa komgca
Yintoni echaphazela iNani loMgca wendlela ebuyiswayo ngokuPhenduka kweSandla
Umlinganiselo weGear is a figure that reflects the number of revolutions made by spool of a reel or rotor for each turn of the handle. Kubalwa ngokubala amazinyo ezigesi kwi-gear drive enkulu kunye nokwahlula ngokubalwa kwezinyo zepinithi yamancinci. Ngaloo ndlela, ukuba i-gear drive inamazinti angama-60 kunye ne-pinion gear ineamazinyo alishumi elinambini, i-gear ratio i-5: 1, oku kuthetha ukuba ukujika omnye kwe-reel handle kuyobangela ukuba i-spool okanye i-rotor ijike amahlanu.
Izilinganiso eziqhelekileyo zamagaretha zokuloba zi-3.5: 1 okanye 4: 1, kunye nezilinganiso eziqhelekileyo zamanqaku angama-6: 1, nangona iirati zeendlela eziphakamileyo ziphantsi nangaphezulu. Umyinge wokulinganisela we- reel esetyenzisiweyo esetyenzisiweyo kumanzi amanzi asetyenziswa ukuba abe malunga no-5.2: 1, kodwa ufana no-6: 1 namhlanje, oku kunokubangela ukuba abanye abantu bahlule ukwahlula i-5.2: 1 gear ratio yokujikeleza i-reel ephantsi. Ngesibindi se- baitcasting yi-5.1: 1, kunye ne-conventional (inshore trolling) i-3.8: 1.
Ukukhawuleza kweeNzantya kunye noLwahlulo lweeNdaba ezihlukeneyo
Ezi zihlandlo zihlala zibhekiswa ngokubhekiselele kwisantya. Ngokomzekelo, i-reel enexabiso eliphezulu leempahla libizwa ngokuba li-reel speed speed. Nangona kunjalo, umlinganiselo weearti kuphela ubeka isenzo sokusebenza kwamagesi, okuyiyo nje ibali lebali. Abaninzi abathenga abathengi, ngamanye amaxesha basincediswa ngamazwi okuthengisa, ngokugqithiseleyo bacinga ukuba umlinganiselo ophezulu wegesi uthetha ngokukhawuleza kwendlela yokufumana, kodwa akuyinto elula.
Ngokwenyani, isivinini sinqunywe inxalenye ngesilinganiselo segesi kunye nxalenye ngengakanani ye-spool ye-reel.
Umcimbi ochaphazelekayo yiyo: ingakanani umgca obuye ufunyenwe ngokujikeleza kwesibambo?
Nantsi ukuqhathaniswa okunengqiqo: I-reel ne-4.4: 1 ratio gear kunye ne-2-intshi-diameter spool iya kubuyisa i-13.8 intshi yomgca ngokujikeleza kwesibambo. I-reel ene-6.2: 1 ratio ye gear kunye ne-1.5-intshi-diameter spool iya kubuyisa ngaphantsi kwama-intshi ayi-intshi yomgca nge-turn of handle.
Isalathisi esinomlinganiselo we-6.2: 1 siya kuthiwa ngumzekelo wesantya esiphezulu esekelwe ngokuthe ngqo kwizinga lokuhamba kwamanani, kwaye umyinge onomyinge we-4.4: 1 wawuza kuthiwa umzekelo wesantya esisezantsi. Nangona kunjalo i-4.4: 1 i-reel iya kushukumisa ukukhwela emanzini ngesivinini esheshayo ngokujikeleza kwesibambiso se-reel. Umgca ophezulu kukuba ubungakanani be-spool (kunye nomlinganiselo womgca kwi-spool) ngokudibanisa ne-gear ratio yintoni echaphazela ukubuyiswa komgca.
Indlela yokulinganisa ukubuyiswa komgca
Awukwazi ukukhawuleza ukufumanisa ukufumana umgca wendlela xa uvavanya i-reel ongayithengela kuba iinkcukacha kwi-circumference ye spool ayisoloko zibonelelwe kwi-reel okanye kwizinto zokupakisha. Unokwazi, umzekelo, ukuba nomlinganiselo we-4: 1 u-reel enye yokuguquka kwesibambo ibeka i-wraps enye yomgca kwi-spool, kodwa ukuba awukwazi ukuba umgca wenziwa njani ngokugqitywa okupheleleyo, awuyi uyayazi ukufumana kwakhona.
Nge-reel eyakho, ukubuyiswa komgca kunokwenziwa ngolu hlobo: ukuphosa ukukhwela kwakho kumgama omfutshane, phawula umgca kwindawo echanekileyo (njengebhayisiki yebheyili), yenza ujikelezo olupheleleyo lwesibambo, phawula umgca kwindawo efana neyokuqala, ngoko umqhawule umgca uphinde uphinde ulinganise icandelo phakathi kwamanqaku.
Mkhulu, iiSpools ezipheleleyo zenza umehluko
Lo mzekelo malunga nokumisela ukubuyiswa komgca kuthatha ukuba i-spool ye-reel igcwaliswe kwindawo ephezulu kunye nomgca .
Ukubuyiselwa komgca ngokujikeleza kwesibambo kuyahluka ngokusekelwe kwisixa somgca kwi-spool. Xa umgangatho womgca uphantsi, njengoko kunokwenzeka xa intlanzi enamandla ithatha umgca omkhulu, umgca ongaphantsi ufunyenwe ngehora lokubamba kunokuba bekuya kuba xa yonke into okanye ininzi yomgca ikhona kwi-spool. Njengomthetho, kungcono ukugcina i-reel igcwele, kwaye ubeke umgca umgca xa uhlaselwa kwi-spool.
Eyona nto ibhetele kwihlabathi iimbini i-reel ephezulu kunye ne-spool enkulu ye-spool epheleleyo yomgca. I-reel ene-6.2: 1 ratio ye gear kunye ne-2-intshi-diameter spool yayiza kubuyisa malunga no-19.5 intshi yomgca ngokujikeleza kwesibambiso, esona sihlandlo esiphezulu kakhulu kunokuba yeyiphi imimiselo yangaphambili.
Enye inzuzo yokusebenzisa i-reel kunye nobubanzi be-spool ngokubanzi kukuba iyanciphisa imemori yomgca, ithetha ukusetyenziswa komgca ongaphantsi.
Oku kungaphezulu kwimiba ye- nylon monofilament kunokuba kunemigca ephezulu eboyiweyo .
Indlela yokudibanisa "i-Lunch" (Ukutya)
I-Oneota yeCulture - iNkcazo yokuQala kokuQala kweMbali yaseMelika eMidwest
Ugqirha wePhilippines uFe Del Mundo